Ma dhab baa in hay’adda Shaqaalaha Dawladdu hakisay kala xulista shirkaddihii soo dalbaday Mashruucii Tobanka Milyan ee Doolar ahaa ee Horumarinta shaqaalaha Dawladda? |
Ma dhab baa in hay’adda Shaqaalaha Dawladdu hakisay kala xulista shirkaddihii soo dalbaday Mashruucii Tobanka Milyan ee Doolar ahaa ee Horumarinta shaqaalaha Dawladda?
Hay’adda Shaqaalaha Dawladda ayaa dhawaan soo bandhigtay in lacag Toban Milyan oo Doolar ah oo wax lagaga qabanayo horumarinta masharaaiicda loogu Deeqay, taasoo wax weyn ka tari doonta dibu-habayntooda.
Lacagtan oo maamulkeeda ay u tartameen dhawr shirkadood ayaan wali la kala saarin cida ku Guulaysatay, hase yeeshee waxa soo baxaya warar sheegaya in ay masuuliyiinta hawshan ku shaqada leh ay hakiyeen, kala saarida shirkaddihii soo dalbaday.
Ma jir war rasmi ah oo illaa hada ay arrintan ka soo saartay Hay’adda shaqaalaha Dawladdu, hase yeeshee Ilo wareed lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in loo hakiyey siyaabo aan la garanayn, taasoo loo aanaynayo inay jiraan caqabado hoose oo wax ka bedeli karta cidii quud-daraynaysay inay ku Guulaysan karaan mashruucan.
Mashruucan ayaa la kowsaday bilowgiiba tuhuno badan oo lala xidhiidhinayo inaan sidii yahay looga faa’iidaysan doonin, isla markaana uu noqon doono mid inta badan ku baxa daraasado iyo kharashaad la isticmaali doono.
Shaqaalaha Dawladda ayaa ka cawda duruufaha ay ku shaqeeyaan oo aad u adag, kuwaas oo aanay Xukuuamadduhu waxba ka qaban, hase yeeshee waxa la majeerto oo ugu weyni ay tahay Dugsiga Tababarka shaqaalaha oo inta badan ay ka faa’iideen Aqoon.
Hase yeeshee, waxyaabaha inta badan ay ka hadlaan ee ragaadiyey shaqaalaha Dawladda waxa ka mid ah inaan laga difaacin masuuliyiinta ku xad-gudbaya iyo inaanay qaadan mushaharooyin ku filan, halka Gunnooyinkii ay xaqa u lahaayeen aanay aragba.
Xisaabaha Dhiirigalinta ah ee shaqaalaha Dawladda ugu jira Miisaaniyadda ayey ku eedeeyaan inay masuuliyintu iska Isticmaasho, halka xuquuqahooda gaarka ah ee shaqo ka tagista, Caafimaadka iyo kaabayaasha kale ay helaan oo kaliya inta garab iyo Gaashaan ka heli karta masuuliyiinta Xukuumadda ee ay isku haybta yihiin ama galaan-gal u yeelan karaan.